Soo saaraha iyo Soo-saaraha Taayirada Baaskiil Shiinaha | Ruiyi
Taayirka mootada ayaa ka samaysan caag, xirashada u adkaysata, ka hortagga taraatiga, caddaynta mindi, u adkaysiga ilmada, heerkulka sare u adkaysta, heerkulka hooseeya ee u adkaysta, saxsanaanta hawsha. Anaga oo ah soo saare taayirrada mootooyinka, waxaan sameyn karnaa faahfaahin kasta, oo ku habboon mootada, ku habboon rakibaadda, iyo cabbirka taayirrada mootooyinka sidoo kale waa la habeyn karaa. Qaab dhismeedka cusub ayaa si weyn u wanaajinaya xasilloonida istaagida mootada, isteerinka saxda ah iyo jarista ka bixida geeska oo si aad ah uga wanaagsan
Taayirka mootada ayaa laga sameeyay caag, xirto u adkaysta, anti-taraarax, mindi caddayn, jeex adkaysi, heerkulka sare u adkaysta, heerkulka hooseeya u adkaysta, sax processing.
Maadaama aan nahay soo saare taayirrada mootada, waxaan sameyn karnaa faahfaahin kasta, oo ku habboon mootada, ku habboon rakibaadda, iyo cabir taayirrada mootooyinka ayaa sidoo kale noqon kara loo habeeyay
Qaab dhismeedka cusub ayaa si weyn u wanaajinaya xasilloonida istaagida mootada, isteerinka saxda ah iyo jarista ka bixida geeska oo si aad ah uga wanaagsan
Waxaa badanaa loo isticmaalaa mootooyinka sida taayirada mootada.
♦ Gobolka iibka
Koonfur-bari Aasiya, Yurub, Ameerika iyo Afrika ayaa ah meelaha ugu badan ee wax lagu iibiyo.
Taayiradeenu badanaa waxay ka samaysan yihiin caag.U Isticmaal caag ah maadada ugu muhiimsan waxay hagaajin kartaa xasiloonida iyo saxsanaanta taayirka, waxayna leedahay astaamaha u adkeysiga xirashada, iska caabbinta iska caabida, iska caabinta mindi, iska caabbinta ilmada, iska caabinta heerkulka sare iyo iska caabinta heerkulka hooseeya
Xasilloon, saxan, shaqo wanaag iyo xulasho qalab wanaagsan oo ka samaysan caag, xidho - adkaysi u leh, warqad kahortag, anti-mindi, anti-dilaac, heerkulka sare iyo caabbinta heerkulka oo hooseeya.
Qalabaynta saxda ah, faahfaahin kasta si loo gaaro xoogaa si fiican ugu habboon gaariga iyo rakibaadda ku habboon habeynta cabbirka.
"Nolol Dheer", "Qabasho Siman" iyo "Raaxo Raaxo" ayaa ah astaamaha muhiimka ah mooto Turos.
Taayirada gadaal wuxuu sheegan karaa nolol dheer sida ugu badnaan 2.7 jeer.
Waxaa qoray yareynta gudbinta gariirka , waxay bixisaa raacitaan raaxo leh waxayna ka caawisaa ka hortagga daalka, xitaa marka lagu dalxiis tago masaafo dheer.
Waxqabadka joogtada ah ee wadajirka ah iyo kan sare cimri dherer.
Qaab dhismeedka cusub ayaa si weyn u hagaajinaya mooto xasilloonida biriijka, isteerinka saxda ah iyo jarista ka bixitaanka geeska oo si fiican uga sii wanaagsan.
Heerka qallooca meydka hoose wuxuu kordhiyaa dabacsanaanta iyo dareenka taayirada mootada.
Waxa kale oo jira aag garabka jilicsan oo xaqiijinaya xajin aad u fiican markaad xaglo sare u janjeeraysid.
Hagaajinta qoyan iyo qalalan.
Si dhakhso ah u kululee.
Nimble, maaraynta la saadaalin karo.
Si dhakhso leh u soo gal.
* Naqshadeynta muuqaalka iyo qaaciddada isku dhafka tread,
Ka dhig inay yeelato iska caabin wanaagsan
* Naqshadeynta naqshadeynta marinka iyo badda
Saamiga kordhay, hagaajinta badbaadada wadista maalmaha roobka
Iyada oo waxqabadka qabashada qoyan
* Naqshad dhismeedka qaabdhismeedka ayaa si fiican u bixiya
* Caanaha isku dhafka ah ee wanaagsan, iska caabin wanaagsan
* Rogitaanku waa aamin wuxuuna siiyaa xajin fiican
Dhulka iyo kala-goynta
* Naqshadeynta SIPE si loo xoojiyo qabsashada qoyan ee u dhexeeya taayirada
Ku qasbo inaad xoojiso saameynta dheecaanka
* Naqshadeynta qaabka jihada ayaa bixisa
Awood qabasho qoyan oo aad u wanaagsan
Hore: Baaskiilka Baaskiilka
Xiga: Soosaarayaasha Shiinaha ee taayirada mootooyinka
Tayo sare leh qalab gaari gacmeedka Shiinaha Trailer g ...
Tayada ugu fiican Shiinaha Caan ka ah Baaskiil Xoog leh
Siinta OEM Shiinaha Tayada Sare 4.00-8 Wheelbarro ...
Iibinta warshad Shiinaha warshad jumlada Rubber Wheel
OEM soo saaraha Shiinaha rullaluistemadka sharciga
Siinta OEM Shiinaha 420mm * 1.9m Sublimation Calende ...
Gawaarida Caster, Shiinaha PU Wheel, PU Wheel, Shiinaha PU xumbo Wheel, Shiinaha Mashiinka la taaban karo, Gawaarida Gawaarida Gawaarida,